» “दल दर्ताको अन्तिम दिन, किन रामकुमारी झाँक्री तनावमा आइन ? भनिन्, निर्वाचन आयोगले पुर्वाग्रह देखायो” “दल दर्ताको अन्तिम दिन, किन रामकुमारी झाँक्री तनावमा आइन ? भनिन्, निर्वाचन आयोगले पुर्वाग्रह देखायो” – हाम्रो खबर
“दल दर्ताको अन्तिम दिन, किन रामकुमारी झाँक्री तनावमा आइन ? भनिन्, निर्वाचन आयोगले पुर्वाग्रह देखायो”
“काठमाडौं । प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिन निर्वाचन आयोगले बुधवार नेताहरुलाई प्रत्यक्ष उपस्थितीमा सनाखतका लागि बोलाएको छ । विहान ११ वजे देखि सो पार्टीका नेताहरु सनाखतका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । तर सनाखतका लागि निर्वाचन आयोग पुगेकी नेता रामकुमारी झाँक्री भने तनावमा आएकी छन् ।”
“उनले निर्वाचन आयोगले पुर्वाग्रह देखाएको आरोप लगाइन् । आज आयोगमा आउने जोकोही केन्द्री सदस्य वा सांसदको आयोगले सनाखत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगमा पार्टीका नेताहरुको सनाखत प्रक्रियया चलिरहँदा झाँक्रीले पत्रकारहरुसँग आफ्नो असन्तुष्टि पोखेकी हुन् ।”
“उनले भनिन्, ‘विगतका अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्छ । विगतमा विदेशमा बसेकाहरुको पनि सनाखत भएको उदाहरण छन् । साथै, आज एमालेको १५४ जनाको संसदीय दल वा २०३ जना केन्द्रीय सदस्यहरु जो आएर यता उभिन्छौं, सनाखत गर्नुपर्छ ।’”
“झाँक्रीले एमालेका मान्छेहरु आयोगमा आएर विभिन्न दबाब दिएको आरोप लगाइन् । साथै आयोगका प्रमुख आयूक्तले पनि पहिलेदेखि पूर्वाग्रह राखेको र अहिले पनि त्यस्तो देखाएको उनको दावी छ ।”
“एमालेमा मर्ज भएको मध्यमार्गी धारको विषयमा झाँक्रीले उनीहरुका लागि पार्टीको ढोका खुला राख्नुपर्ने बताइन् । वामदेव गौतम भने एमालेबाट राजीनामा नै दिएर आउने भन्दै उनका लागि दल बदलको कानून आकर्षित नहुने झाँक्रीले टिप्पणी गरिन् ।”
“राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार दल विभाजनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत चाहिन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताका लागि निर्वाचन दिएका नेताहरुले केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पु¥याउन खोजेका छन् । दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा एमालेको २०३ सदस्यीय कमिटीका ५७ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।”
“नेकपा एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्न लागेका नेता माधवकुमार नेपालले २० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउन असफल भएका छन्। प्रस्तावित नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० दल दर्ताका लागि २९ जना सांसदको मात्रै हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। नेपाललाई एमाले फुटाउन संसदीय दलतर्फ ३१ जना सांसदको खाँचो थियो।”
“उनले आयोगमा ३१ जना सांसदकै विवरण पनि बुझाएका थिए। तर दिल्लीमा उपचाररत झलनाथ खनाल र अर्का एक सांसद हस्ताक्षर आयोगमा पुग्न नसकेको हो। दिल्लीमा उपचाररत नेता झलनाथ खनालसहित थप चार जनाको निर्वाचन आयोगले आज सनाखत नगरिदिने भएपछि नयाँ पार्टी गठन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको माधव नेपाल समूह त ना वमा परेको छ।”
“आयोगले मंगलबार एमाले छाडेर नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा समावेश हुन निवेदन दिएका तीन एमाले सांसद र एक केन्द्रीय सदस्यको बुधबार सनाखत नगराउने भएको छ।एमालेबाट फुटेर नयाँ पार्टी गठन गरी पाऊँ भनेर आयोगमा शुक्रबार एमालेका ३१ सांसद र ५७ जना केन्द्रीय सदस्यले निवेदन दिएका थिए। तर सो निवेदनमा ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र २९ जना सांसदको मात्र हस्ताक्षर रहेको आयोग स्रोतले बतायो।”